Ukuthandazela umntu obhubhileyo Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukuba unelungu losapho okanye umhlobo omthanda kakhulu kodwa ongasekhoyo ngokwasemzimbeni nathi kwaye ufuna i ukuthandazela umntu obhubhileyo, Ukuze uvalelise kubo okanye umkhumbule ngothando olukhulu kwaye unike imbeko emphefumlweni wakhe, ndiyakumema ukuba uqhubeke nokufunda eli nqaku.
Funda malunga nemithandazo onokuyifunda naliphi na ilungu losapho okanye umntu omthandayo ongasekho kule moya yasemhlabeni.
1 Umthandazo omkhulu womntu oswelekileyo omthandayo
1.1 Umthandazo womntu omthandayo osweleke kunyaka wabo wokuqala
1.2 Umthandazo wesizalwane esingasekhoyo
1.3 Umthandazo womntu obhubhileyo
1.4 Umthandazo womfi wethu
1.5 Umthandazo womfana oswelekileyo
1.6 Umthandazo womntu obhubhileyo kunye namalungu osapho
Umthandazo omkhulu womntu oswelekileyo omthandayo
Sonke siphulukene nelungu losapho okanye umntu esimthandayo kwaye kuqhelekile kuthi ukufuna ukucengceleza eminye imithandazo yomphefumlo wabo, kunye nemiphefumlo yabo bonke abantu abasele bemkile. Ukukhumbula umntu esimthandayo kakhulu, kulungile ukumthandazela loo mntu, sicela iNkosi yethu ukuba inyamekele umphefumlo wayo kwaye ihlala isempilweni. Ayikuko ukumlibala, kodwa ukumthanda yena rhoqo nokuphakamisa imithandazo yethu egameni lakhe.
Kukho ezahlukeneyo ukuthandazela umntu obhubhileyo, nokuba ngutata, umama, umhlobo, umntu omaziyo, phakathi kwabanye. Le mithandazo yenziwa ukubanceda bangene ezulwini, ngaphambi komhla wokugqibela womgwebo, yiyo loo nto thina bathembekileyo siyicengceleza imithandazo, ukucela iNkosi ukuba ikhulule umphefumlo womntu esimthandayo ezonweni. Ngokunjalo, sinokuthandazela loo miphefumlo ingenamntu wokuyicengcelezela kwaye iyidinga kakhulu uThixo ukuba ayibonakalise inceba. Ukuba unomdla kweli nqaku, mhlawumbi unokuba nomdla: Umthandazo uvula iindlela.
Umthandazo womntu omthandayo osweleke kunyaka wabo wokuqala
Nkosi, mnini wobomi. Wena osinika injongo kobu bomi kwaye ukuba siwuzalisekise umzuzu, usisa eBukumkanini bamazulu, xa umsebenzi wethu ugqityiwe.
Awukwenzi ngaphambili, awukwenzi kamva.
Namhlanje ndizibonakalisa phambi kwakho ngokuzithoba okukhulu, ndiyazi ukuba uya kusimamela isicelo sam.
Namhlanje ndiyakubongoza ngomphefumlo wesithandwa sam (yitsho igama lomntu ongasekhoyo)
Ubize bani ukuba aphumle ecaleni kwakho
Ndiphakamisa lo mthandazo phambi kwakho Bawo, kuba nakwezona zihlandlo zinzima, apho sizifumana sihlupheka, uluxolo.
Thixo, nika ukuphumla okungunaphakade kulo mphefumlo, kwiparadesi yobukumkani bakho, kuba akusekho kulomhlaba.
Wena unenceba engapheliyo, unike uxolelo kwizono zalo mphefumlo usecaleni kwakho kwaye unike ubomi obungunaphakade.
Ndiyakucela nakubo bonke abo baphulukene nelungu losapho kwaye banentliziyo ebuhlungu, bathuthuzele kwaye ubazalise ngothando lwakho.
Banike ubulumko bokuqonda okwenzekayo kwaye ubanike uxolo lokufumana ukuzola kula maxesha anzima.
Banike inkalipho yokoyisa usizi.
Ndiyabulela, Nkosi yam, ngokumamela le mithandazo ndiyiphakamisayo kuwe namhlanje, ukuze usasaze inceba noxolo lwakho kwabo bantu bayifunayo ngelixesha.
Bakhokele kwindlela yabo, njengoko ngoku bexhwalekile kwaye ubabonise ubuhle bobomi, ukuze babonwabele. Amen ".
Thandazela yonke imiphefumlo yabantu abaswelekileyo, ukuze uThixo abanike ukuba bangene eBukumkanini bamazulu.
Umthandazo wesizalwane esingasekhoyo
«Owu Intliziyo entle kaYesu! Wena ohlala usabela kwizigulo nakwintlungu yabantu, ndiyakucela ukuba ubeke umbono wakho wokuhlonela kuyo yonke imiphefumlo yabathandekayo bam, abakhoyo kubukumkani bamazulu.
Ndiyakubongoza ukuba uwuve umthandazo wam ngovelwano ngabo kwaye wenze abo bangasekhoyo ngokwenyama nathi banandiphe ukuphumla okungunaphakade.
Umthandazo womntu obhubhileyo
«Thixo, wena onika uxolelo lwezono kunye nosindiso lwabantu,
Namhlanje silapha, sibongoza inceba yakho engenasiphelo, kubo bonke abazalwana bethu kunye nezihlobo ezishiye eli hlabathi.
Banike ubomi obungunaphakade ebukumkanini bakho.
Umthandazo womfi wethu
«Nkosi yam, Thixo wam, namhlanje ndibonakala phambi kwakho ngokuzithoba okukhulu, ndikucela umphefumlo (Igama lomntu ongasekhoyo) lowo umbizele ukuba aphumle nawe.
Ndiphakamisa lo mthandazo phambi kwakho Thixo uSomandla, kuba nguwe wedwa onganika uxolo, nakwezona meko zinzima.
Bawo ongunaPhakade, nika ukuphumla okungunaphakade kwiparadesi kumphefumlo ongasekho kule nqwelo moya yasemhlabeni kwaye waqala indlela eya ezulwini elithenjisiweyo.
Wena, onguthixo ka infinito Uthando noxolelo, ndiyakucela ukuba uzixolele izono anokuthi lo mntu uzenzile kwaye umnike ubomi obungunaphakade.
Ndiyakucela nawe Nkosi, kubo bonke abantu ababandezeleka kukushiywa ngumntu abamthandayo. Bamkele ngothando lwakho kwaye ubanike ubulumko ukuze baqonde ukuba kwenzeka ntoni ngalo mzuzu besebunzimeni.
Banike ukuzola nokuzola, ubukrelekrele ukuze babeke umntu wabo obathandayo ongasekhoyo kwaye bamkhumbule ngothando, babanike inkalipho ukuze boyise usizi baqhubeke ngokudumisa nokuzukisa wena.
Ndiyabulela kuwe, Bawo waseZulwini, ngokumamela imithandazo yam endiyiphakamisayo phambi kwakho namhlanje, ukuze usasaze inceba yakho kwaye unikeze uxolo lwanaphakade kunye noxolelo lwezono kwimiphefumlo yabantu abangasenathi. Sikhokele konke esikulandelayo kule nqwelo moya yasemhlabeni, ukuze siqhubeke nokonwabela eso sipho sobomi usinike sona. Amen. «
Umthandazo womfana oswelekileyo
«Thixo wethu, wena uqondisa iindlela kunye nobude bobomi bomntu ngamnye; Namhlanje ngokunyaniseka nangokunyaniseka sinikezela unyana wakho (Igama lomfi), oshiye isijwili ngenxa yokuhamba kwakhe phambi kwexesha nangalindelekanga.
Siyakucela ukuba umnike ulutsha olusisigxina kulonwabo lwekhaya lakho kubukumkani bamazulu. NgoYesu Krestu iNkosi yethu. Amen. «
Umthandazo womntu obhubhileyo kunye namalungu osapho
«Nkosi yamandla onke, ngokuthobekileyo sikubeka, mzalwana wethu, othe wakhusela ngothando lwakhe olukhulu ebomini bakhe kulo mhlaba womhlaba; Ngoku uthathe isigqibo sokumbiza ukuba aphumle ecaleni kwakho, mnike ukuphumla okungunaphakade. Siyabongoza inceba yakho ukuba ivule amasango eParadesi kulo mphefumlo ungasenathi, apho ungasekhoyo okanye ukufa, ungaphelelwa lithemba, hayi iintlungu, kodwa uxolo kunye nokonwaba kunye noNyana wakho kunye noMoya oyiNgcwele, ngonaphakade kanaphakade. Amen. «